Cabdisalaan Guuleed: “Qoor-qoor waa qareenka Farmaajo” | KEYDMEDIA ONLINE
Cabdisalaan Guuleed: “Qoor-qoor waa qareenka Farmaajo”
Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo ahaa taliye ku xigeenkii hore ee NISA, qeybta howlgallada, ayaa Madaxweynaha Maamulka Galmudug Qoor-qoor ku eedeeyay inuu baal maray shaqadii loo igmaday iyo xilkii loo dhiibay, kana shaqeeyo kaliya danaha Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Cabdisalaan Y Guuleed, ayaa Sii-hayaha xila Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble iyo Axmed Cabdi Kaariye ‘Qoor-qoor’ ku eedeeyay in ay yihiin qareenada Farmaajo, wuxuuna tilmaamay in ay yihiin caqabadda ugu weyn ee dhex fadhisa shirka Afisyooni.
Guuleed, Wuxuu sheegay in Qoor-qoor uu ku dhawaad 45 maalin ka maqan yahay, guud ahaa degaannada Galmudug, uuna ka doorsaday u adeegidda Farmaajo oo marna Turki ku qariyay marna Maaweelinta Musharixiinta u adeegsada, sida uu hadalka u dhigay.
“44 maalin ayuu kasoo maqan yahay maamulkii iyo magaaladii uu madaxweynaha ka ahaa. Wuxuuna intaas ku maqnaa, mar Farmaajo Turkey ku qarsado, mar uu u isticmaalo maaweelinta murashaxiinta iyo xag xagashada madaxda dhigiisaa”. Ayuu yiri Guuleed.
Agaasime ku xigeenkii hore ee NISA, wuxuu xusay in Farmaajo rag ay saaxiibo yihiin uu u sheegay in Qoor-qoor yahay qareenkiisa oo haddii uu sidaas ogaan lahaa aann xitaa loo baahdeen in lacag lagu bixiyo qareenno ajanabi ah oo difaaca badda Soomaaliya, waa sida uu hadalaka u dhigaye.
“Qolo uu Farmaajo ku xan qarsado ayuu si kaftan ah ugu sheegay, “haddaan ogaan lahaa in qoor-qoor sidaan u diyaarsan yahay, lacag kuma baxsheen qareenada dacwada badda Soomaaliya difaacaya” Ayuu yiri Guuleed.
Khabiirkaan ku xeel dheer amniga iyo la dagaalanka Argagixisada, ayaa sheegay “in Soomaali iyo Ajanabi oo dhan ay la yaaban yihiin “in Madaxweyne Qoor-qoor, ka mid noqday caqabadaha ugu waa weyn ee maanta shirka Afisyone ka dhaqaqi la yahay.
Agaasime ku xigeenkii hore ee NISA, wuxuu qoor-qor kula taliyay inuu caqligiisa u laabto kana shaqeeyo howlihii loo igamaday ee xilka uu hayo loogu dhiibay.
Qoorqoor, ayaa maanta u safri doona Dhuusamreeb si uu u soo cusboonaysiiyo muddada ka maqnaashiyaha degaannada uu Madaxda ka yahay, wuxuuna dib Muqdisho ugu soo laaban doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan.